के तपाईलाई धेरै पसिना आउँछ ? यस्ता छन् रोकथामका उपाय - ज्ञानविज्ञान
के तपाईलाई धेरै पसिना आउँछ ? यस्ता छन् रोकथामका उपाय
शरीरबाट पसिना निस्किनु एक स्वभाविक प्रकृया हो । पसिनाको माध्यमले शरीरभित्र भएको बिकार बाहिरआउछ । शरीरबाट पसिना निस्केन वा कुनै कारणबस पसिना भित्रै रोकिन गयोभने धेरै प्रकारका शारीरिक रोगहरु उत्पन्न हुन सक्छन् ।
बढि पसिना आउन नदिन के गर्ने ?
शरीरमा बढि पसिना आउन न दिनका लागि सबभन्दा राम्रो उपाय हो, शरीरलाई शितल राख्नु । यसको लागि घाम चर्किएको बेला घाममा ननिस्किने, दौडधुप र ब्यायाम कम गर्ने, शितलमा बस्ने, नियमित नुहाउने, पानी प्रशस्त मात्रामा पिउने, आफनो खानामा हरियो साग-सब्जिका साथै दही, मोही तथा सिजनअनुसारको पानीयुक्त फलफुलहरु तरबुज, खरबुज, काक्रो बढि मात्रामा खाने, नरिवल पानी पिउने, चिया, कफि, बरफको सेवन नगर्ने, राति अबेरसम्म नबस्ने, धैरे बेर भोको नरहने, बढि मसालादार (गरिष्ठभोजन) नगर्ने, खानामा लसुन, अदुबा, गोल मरिचको प्रयोग कम गर्ने र प्याजको मात्रा बढाउने गरियो भने अत्याधिक पसिना आउने क्रमलाई घटाउन सकिन्छ ।
केहि मानिसहरु बढि पसिना आउने डरले पानी कम पिउने गर्दछन् । यो राम्रो होईन, पानीको मात्रा शरीरमा कमभयो भने डिहाईड्रेशन हुनसक्छ ।
यि सबै उपायहरुलाई मनन गरी अपनाईयो भने केहि हदसम्म बढि पसिना आउने समस्यालाई घटाउन सकिन्छ । उपरोक्त बिधिबाट पनि पसिनाको मात्रा कम भएन भने चिकित्सकको सल्लाहमा औषधिको सेवन गर्नुपर्छ ।
१) यदि आँखा बन्द गर्ने बित्तिकै पसिनआउछ भने, ब्रायोनिया, कोनियमको प्रयोग लाभकारी हुन्छ ।
२) यदि जाडो भएर शरीरमा पसिना आयो भने, नक्सभोमिकाको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
३) टाउको बाहेक शरीरको अन्य खुल्ला भएको भागमा पसिना आउछ भने, यस्तो लक्षणमा रोगी लाई थुजा नामक औषधिको सेवन गराउनु पर्छ ।
४) यदि कुनै कारणबिना नै अनुहारमा पसिना बढि आउछ भने, रस टक्स या सिकेलिकोर औषधिको प्रयोग गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
५) यदि रोगीलाई ब्युँझेको अवस्थामा मात्र पसिना आउछ भने, सेम्बुकस नामक औषधिको सेवन हितकारी हुन्छ ।
६) यदि शरीरमा लुगाले ढाकेको भागमा मात्र पसिना आउछ भने, एकोनाईट, बेलाडोना, चायना आदि औषधिको सेवन गर्नुपर्नेहुन्छ ।
७) यदि पसिना शरीरको देब्रेभागतिर मात्र बढिआउछ भने, पल्साटिला, पेट्रोलियमको प्रयोग गर्दा लाभदायक हुन्छ ।
८) शरीरको जुन भाग पट्टि फर्केरसुत्दा त्यहि त्यकी साईडमा बढि पसिना आउछ भने, ब्रायोनिया, नक्सभोमिका, जिकंम आदि औषधिहरुको प्रयोग बढि फाईदाजनक हुन्छ ।
९) यस्तै जतापट्टि फर्केर रोगी सुत्छ त्यस भागमा पसिना नआउने बरु त्यसको बिपरित भागमा पसिना आउछभने बेन्जोईक एसिड, थुजा, सेनिकुल्ला नामक औषधिहरु मध्ये लक्षण अनुसार कुनै एकऔषधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१०) यदि निदाएको बेला मात्र पसिना आउछ र ब्युँझिएपछि हराउछ भने, कोनियम नामक औषधिको प्रयोग हितकारी हुन्छ ।
Don't Miss it काखी गनाउने समस्या छ ? यस्तो छ सजिलो घरेलु उपचार
Up Next पिनासको आयुर्वेदिक उपचार र जोगिने उपाय
फ्रिजमा राखेको अन्डा खादा स्वाथ्यलाई हुने नराम्रो असर, जानी राखौ
धेरै जसो हामी खानेकुरा ताजा राख्न फ्रिजको प्रयोग गर्छौं तर हामीलाइ थाहा छैन कि फ्रिजमा राखेको खानेकुराहरुले काँही न काँही…
ग्यास दुघर्टनाबाट बच्ने केहि टिप्स
सहरी क्षेत्रमा खाना पकाउनका लागि ग्यास अनिवार्य बनिसकेको छ । पछिल्लो समय त गाउँगाउँमा समेत ग्यास लिएर राख्ने प्रचलन बढ्दो…
यस्ता छन्, खजुरको सेवनबाट हुने फाइदा
– खजुर खानाले थकाइ महशसु भएको बेला खजूर खाएमा तुरुन्तै शरीरमा ऊर्जा भरिएर आउँछ । – दमका रोगीलाई राहतको महसुस…
किन हुन्छ बालबालिकामा मोटोपन ? बढी मोटोपनाले कस्तो समस्या आउछ ? जान्नुहोस्
विकसित देशको तुलनामा विकासोन्मुख देशमा मोटोपन धेरै कम मात्रामा पाइन्छ । विकसित देशको खानपिन, जीवनशैलीको नक्कल गर्दै नेपालमा पनि विगत…
आत्मविश्वास बढाउने ७ सूत्र
आत्मविश्वास यस्तो क्षमता हो, जसले मानिसलाई अगाडि बढ्न र नयाँ काम गर्नको लागि प्रेरणा प्रदान गर्छ । संसारमा जति पनि…
कतै तपाई पनि नुहाउँदा यी ६ गल्तीहरु त गरिरहनु भएको छैन ?
गर्मी मौसममा दैनिक रूपमा नुहाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र धुलो र पसिनाले शरीरलाई फोहोर बनाउँछ । तर, नुहाउने समयमा पनि हामीले…
काठमाडौंमा प्रयोग गरिने धेरै मास्कले धुलो छेक्न सक्दैनन्, किन ?
काठमाडौं उपत्यकामा धुँवा र धुलोका कारण आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन देशका मुख्य…
प्रेममा परेको कसरी थाहा पाउने ? जान्नुहोस्
खुसी राख्ने प्रयास प्रेम एक साझा सम्बन्ध हो । यद्यपी जब कसैसँग प्रेम हुन्छ, उसको खुसीले हाम्रो जीवनमा खास महत्व…
निर्धारित अवधिभन्दा अगावै बच्चा जन्मने कारण, यस्तो छ
समय अगावै बच्चा जन्मेमा -गर्भधारण भएको ३७ हप्तापछि जन्मेको बच्चालाई मात्र स्वस्थ्य मानिन्छ । समय अगावै जन्मिदा बच्चा र आमा…